Ungawaphatha njani amagqabantshintshi angafanelekanga kuYouTube? -YTpals
Nokuba ungakanani umzamo owenzayo ekudaleni ividiyo yakho, kuya kuhlala kukho iqela labantu, ngaphandle kwababhalisi bakho abathembekileyo, abangayi kuwuthanda umsebenzi wakho. Awunakulindela amagqabaza akhuthazayo kuye wonke umntu. Awukwazi ukukholisa wonke umntu. Abanye baba bantu baya kuza namagama agxekayo okanye angafanelekanga, mhlawumbi bevakalisa ukungavumelani kwabo okanye ukuthoba isidima sakho. Kukho iindlela ezahlukeneyo apho abadali bajongana nabantu abanjalo kwi-Intanethi, kodwa eyona nto iluncedo kuzo zonke ziisetingi zezimvo zikaYouTube.
Ziphi iisetingi zezimvo zikaYouTube?
Isitudiyo sikaYouTube kulapho utshintsha khona iisetingi zezimvo zikaYouTube. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wazi ukuba awukwazi ukutshintsha useto lwezimvo ukuba
itshaneli okanye ividiyo yeyabantwana (amagqabantshintshi ayacinywa umphelo xa useto lutshintshwa lube “lwenzelwe abantwana”)
une-akhawunti egadiweyo ukuze usebenzise uYouTube.
Utshintsha njani useto lwezimvo oluhlala lukhona?
Ungazitshintsha iisetingi zezimvo zikaYouTube ezisisiseko ukunqanda izimvo ezingafanelekanga kwiphepha lasekhaya letshaneli okanye kwiividiyo ezintsha. Nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele:
Yiya kwiSitudiyo sikaYouTube.
Khetha "Useto" kwimenyu kwicala lasekhohlo.
Yiya ku "Uluntu" kwaye emva koko "Okumiselweyo."
Khetha useto olungagqibekanga kwaye ucofe ku "Gcina."
Unokucinga ngokutshintsha iisetingi zezimvo zevidiyo ngokulandela la manyathelo:
Yiya kwiphepha lakho lomxholo, elibonisa zonke iividiyo zakho. Ukuba ufuna ukutshintsha useto lweevidiyo ezininzi, ungaya kuHlelo lweMininzi.
Khetha "Umxholo" kwimenyu kwicala lasekhohlo.
Cofa kwisithonjana sevidiyo.
Cofa kwindawo ethi "Ukhetho oluninzi."
Khetha iisetingi zezimvo zakho phantsi kwe "Amagqabantshintshi kunye nemilinganiselo" kwaye ucofe ku "Gcina."
Yintoni enye enokwenziwa?
Ukutshintsha iisetingi zezimvo zikaYouTube yindlela entle yokuphepha izimvo ezingafanelekanga kwiphepha lasekhaya letshaneli okanye kwiividiyo zakho. Kodwa kuthekani ukuba uluvo sele lufikile kwiphepha lakho? Indlela yokujongana nale nto?
Ewe, unokwenza izinto ezimbalwa kwinqanaba lokuphawula. Okokuqala, susa izimvo ezingafanelekanga kunye nazo zonke iimpendulo ezizifumeneyo. Ungakwenza oku ngokucofa amachaphaza amathathu avela ecaleni kwaloo magqabaza. Cofa ku "Susa," kwaye iya kususwa umphelo. Unako nokucima amagqabantshintshi kwithebhu ethi "Amagqabantshintshi" kwiSitudiyo sikaYouTube.
Into elandelayo onokuyenza kukuphawula izimvo ezingafanelekanga. Eli nyathelo lizisa izimvo kwiYouTube, nayo eneseti yayo yezikhokelo zokuphawula. Ukuba amagqabantshintshi aphula izibonelelo zeZikhokelo zoLuntu zeYouTube, unokulindela ukuba zisuswe liqonga.
Ekugqibeleni, kufuneka ufihle umsebenzisi othumele inkcazo engafanelekanga. Xa usenza njalo, umsebenzisi othile uvaliwe ukuba athathe naliphi na inyathelo kwiividiyo zakho okanye kwisitishi sakho. Ungavimba umsebenzisi kwizimvo ngokwayo okanye kwithebhu ethi "Uluntu" kwiisetingi zakho.
Wenza ntoni uYouTube ngokulandelayo?
Ukwenziwa ngokwezifiso kweesetingi zezimvo zikaYouTube kuyintsikelelo enkulu kubaqulunqi bomxholo, kodwa iqonga alishiyi litye lingaguqukiyo ukukhusela ubumfihlo kunye nokuthembeka koluntu lwalo. Kutshanje, iYouTube ibhengeze ukuba iza nenqaku elitsha eliza kunika abagqabaza ithuba lokuthatha inyathelo lokubuyela umva baphinde baqwalasele amazwi abo anentiyo.
Eli nqaku litsha linokwenza isihluzi sabadali beYouTube ukunqanda amagqabaza abuhlungu, angafanelekanga. Kuyinyani ukuba abaqulunqi bomxholo baye bakhalaza malunga nomgangatho wamagqabantshintshi eqongeni iminyaka. Kodwa into entsha kufuneka ikwazi ukujongana nale nkxalabo ihleli ixesha elide kwaye ugcine abadali naluphi na uhlobo lokuxhatshazwa kwindawo ye-intanethi.
Useto lwezimvo zikaYouTube lunokukunceda uphephe izimvo ezingafanelekanga kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wazi ukuba yinxalenye yamava onke. Kuya kufuneka uvulekele kubasebenzisi abanjalo kuba bakunika ukujonga okwenyani malunga nendawo. Yiba nomonde kwaye uqhubeke nomsebenzi wakho olungileyo.
I-YTpals inokukunceda ukhulise isitishi sakho sikaYouTube Ababhalisi bamahhala be-YouTube, iimbono, kunye nezinto ezithandwayo. Xhagamshelana nathi namhlanje.
Ungawaphatha njani amagqabantshintshi angafanelekanga kuYouTube? ngababhali beYTpals, 8 Disemba 2021
Ngaba ulishishini elincinci elinomdla wokwenza usasazo olukhulu kuYouTube? Ewe, ufike kwindawo elungileyo. Kweli nqaku, siza kukuthatha kwiingcebiso ezili-10 ezilungileyo zeYouTube zonke ezincinci…
Iindlela ezi-5 eziQinisekisiweyo zokufumana ababhalisi abaninzi beYouTube ngokukhawuleza-Isikhokelo
Njengoko ifuthe likaYouTube kunye nenani labasebenzisi liqhubeka nokukhula ngesantya esikhawulezayo, kuye kwacaca ukuba iqonga levidiyo eqhuba kakuhle kakhulu kwi-intanethi ibambe amathuba ngamathuba okwenza imali kuwo. YouTube ivumela nayiphi na…